You are here: Home somal GUDDAHA KA AKHRI: WASAARADDA CIYAARAHA OO JAWAAB KA BIXISAY EEDAYMO UGA YIMID XISBIGA UCID
War Saxaafadeed uu Maanta soo saaray Afhayeenka Wasaaradda Dhallinyaradda iyo Ciyaaraha, Samatar Maxamed Cabdilaahi, oo nuqul ka mid ahi na soo gaadhay ayaa u dhignaa sidan.
Wasaaradda Dhallinyaradda, Ciyaaraha iyo Dalxiiska Somaliland, waxay halkan jawaab kaga bixinaysaa Eedaymo been abuur ah oo xaqiiqda ka fog oo Xisbiga UCID ku duray wasiirka wasaaradda Md. Cali Siciid Reygal kana soo baxay xafiiska Xoghayaha War-faafinta Xisbiga UCID, kuwaas oo la xidhiidhay in wasiirka iyo wasaaradduba ka gaabiyeen shaqadii ay u xilsaarnayeen.
Waxaanu ka xunahay in Xisbiga UCID ay iska dhaleeceeyaan ciday doonaan iyaga oo aan wax xog ah raadin, waana u caado cambaaraynta iyo eedaynta indho la’aanta ah ee ay haddba cid kala dul dhacaan. Mana aha wax khuseeya inay ka hadlaan oo ay yidhaahdaan hadba Madaxweyne hebel xilka ka qaad, ee waxaa ku waajiba inay ku eekaadaan Xisbigooda, baylahdoodanaay jiho u sameeyaan. Waxaa kale oo aanu ka xunahay in xisbiga UCID uu macno fool xun uu sameeyo hawl-gallada ciidanku uu Amaanka ku sugayo ee lagu xakamaynayo dhallinyarada fidmawday.
Waxaan u sheegaynaa UCID iyo kuwa fikirkooda qaba in maanta marxaladda dhallinyaradu ay meel wanaagsan marayso loona sameeyay sanduuq lagu horumarinayo, sidoo kale dallada ay ku bahoobeen ee SONYO dhisme qurux baddan loo bineeyay. Laakiin arrinta Tahriibtu waa aafo qaran oo wax ka qabadkeedu aanu ku eekayn xukuumadda iyo wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha una baahan qorshe midaysan oo loo wada dhan yahay.
Xisbiga UCID waxaanu u meel dayin arrinta xidhiidhada waxaanu u sheegaynaa in xidhiidhada Olombikada iyo ciyaaruhuba ay shaqeeyaan, lana yimaadeen dedaalo dheeraad ah taas oo sababtay in muddo xileedkoodii hal sanno si ku meel-gaadh ah ugu kordhinay. Tartanka ciyaaraha gobollada waxaa qorshihiisu yahay mid ka duwan kana qurux baddan tartamadii hore maadaama dunida si toos ah looga daawado, waxaana qorshaha koowaad yahay in garoonka kubadda cagta ee Hargeisa Stadium lagu goglo dooga macmalka oo maanta laga soo dejinayo dekedda Berbera, waxaana marka hawlaha qorshaha ee tartankaasu noo dhamaado aanu shaacin doona wakhtiga macquulka ah ee aanu qaban doono haddii Alle Idmo.
Eedaynta indho la’aanta ah ee xisbiga UCID waxay gaadhay heer ay ka been abuuraan orod yahano reer Somaliland ah oo dalka ku sugan kana qeyb-gali doona tartanka Jabouti Half Marathon oo bisha March qabsoomaya, inay ku beer abuuraan inay Muqdisho tageen taasina waxay cadaynaysa xogogaal la’aanta iyo cambaaraynta aan hubsiimada lahayn ee xisbiga UCID ku caano maalay. Waxaana Somaliland markii 4-aad oo xidhiidh ah ay ka qeyb-galaysa bisha Marchorodka Half Marathon ee dalalka Geeska Afrika ka qeyb-galaan oo Jabuuti ka dhacaya.
Ugu dambeyntii waxay ahayd in Xisbiga UCID haddii uu Tafaasiil u baahan yahay uu wasaaradda la soo xidhiidho, sidoo kalena war saxaafadoodkoodii waxa ka muuqday xogogaalnimo la’aan iyo dareen caadifad ku dhisan, xisbi qarana waa looga wanaagsan yahay inuu arimhaasi oo kale bulshadda la hor yimaaddo.
Afhayeenka Wasaaradda Dhallinyarada, Ciyaaraha iyo Dalxiiska JSL.
Samatar Maxamed Cabdilaahi